दयाहाङका प्रिय पाँच नायिकाहरु को को हुन् ? | Emedia Hub UK
Home Entertainment दयाहाङका प्रिय पाँच नायिकाहरु को को हुन् ?
Posted By: Prakash Raion: September 28, 2017 In: Entertainment, Kollywood, NewsNo Comments
अभिनेता दयाहाङ राई दर्शकको रोजाइको केन्द्रमा छन् । हिजोसम्म उनलाई देख्दा मुन्टो बटार्ने फिल्ममेकर अहिले उनीसँग काम गर्न लालायित देखिन्छ । चिम्सा आँखा, थोरै अगाडि निक्लिएको भुँडी र होचो कद उनको फिल्मी यात्रामा बाधक हैन, फलदायी बनेको छ । ‘वीर विक्रम’ को सफलताबाट लाइमलाइटमा रहेका यी अभिनेतासँग स्क्रिन सेयर गर्ने चाह कुन हिरोइनलाई नहोला र ? तर, उनलाई मन पराउने होइन, उनले मन पराउने हिरोइनको प्रसंग झिकेका छन् कान्तिपुर दैनिकले दयाहाङको आफ्ना प्रिय पाँच हिरोइनका बारेमा प्रस्तुत गरेको यो सामग्री हामिले साभार गरेका छौं ।
कामका लागि अति नै मरिमेट्ने कलाकार हुन् उनी, चाहे रातको १२ नै किन नबजोस्, काम गर्न कत्ति पनि अल्छी गर्दिनन् । ढलिन्जेल सुटिङ गरेको देखेको छु । त्यति इनर्जी भएको कलाकार फिल्मवृत्तमा कोही छैन । त्यसैले उनमा लामो समयसम्म चम्कने एकदमै सम्भावना छ । कसैलाई ‘नाइँ’ भन्न नसक्नु र जहिल्यै व्यस्त हुन खोज्नुचाहिँ उनको कमजोरी हो । अभिनय मात्र होइन, स्टेज पर्फमेन्सका लागि विदेश दौडिरहेकी हुन्छिन् । यसो हुँदा गुणस्तरीयता कायम नहुन सक्छ । जसले उनलाई नै घाटा पुर्‍याउँछ ।
रिस्मासँग मैले तीन फिल्ममा काम गरें, त्यसमा आधारमा के भन्न सक्छु भने क्यारेक्टरलाई बुझेर काम गर्न सक्ने क्षमता भएको उनीजतिको हिरोइन अरू छैनन् । पहिलो पटक कबड्डीमा काम गर्दा नै म प्रभावित भएको थिएँ, उनको अभिनय क्षमता देखेर । खारिएको कलाकार जस्तो लागेको थियो । सेटमा उस्तै सहज रूपमा प्रस्तुत हुने र सहकार्य गर्ने बानी छ उनको । पहिले बढी केटाकेटीपना थियो, कबड्डीका बेलामा त रिसाउली कि भन्ने डर लाग्थ्यो, अहिले अलि परिपक्व भइसकेको छ । तैपनि उनले आफूमा अझ गम्भीरता ल्याउनु आवश्यक छ ।
रेखासँग मैले काम त गरेको छैन तर गर्ने रहर छ । पक्का गरिएला पनि । राजेश (हमाल) दाइपछि र अनमोल केसीअघिको स्टार रेखा नै हो । जसको नामले सिनेमा बिक्छ । म अति नै सम्मान गर्छु । उहाँले राम्रो सिनेमा बनाउनु भयो भने अडियन्सको मन यसरी नै जितिरहनु हुन्छ । मैले उहाँको फिल्म हेरेको छु । फिल्म र उहाँको काम दुवै राम्रो लाग्छ । उमेर र भोगाइको हिसाबले त्यति परिपक्व भए पनि एकदमै छिटो र आक्रामक प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ । त्यति सिनियर कलाकारले यसो गरेको सुदाउँदैन । मलाई यो बानी हटाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।
नम्रता ‘हिरोइन मेटरियल्स’ ले भरिपूर्ण छिन् । सुन्दरी मात्र होइन, अभिनय क्षमता पनि उत्तिकै छ । तीन फिल्ममा काम गरेपछि मलाई लागेको के हो भने उनी कथा र पात्रलाई सूक्ष्म रूपमा पहिल्याउन सक्छिन् । त्यसैले हाम्रो फिल्म उद्योगमा दीर्घकालसम्म जम्न सक्ने क्षमता भएका थोरै हिरोइनमा नम्रता अग्रपंक्तिमा छिन् । तर, पछिल्लो समयमा फिल्मप्रति उनको फोकस र प्यासन घट्दै गएको महसुस हुन्छ । यसलाई सुधारेर फिल्ममा प्राथमिकता दिनु जरुरी छ ।
हामीभन्दा धेरै ‘लक्की’ लाग्छ केकी । उनको बुबा बद्री अधिकारी हामी सबैले सम्मान गर्ने रंगकर्मी हो । यसरी पारिवारिक माहोल नै अभिनयका लागि सुगम पाइन् । तर सम्भावना हुँदाहँुदै केही समययता त्यही अनुरूपको प्रगति देखिएको छैन । कहाँ, कता तालमेल नमिलेर यस्तो भइरहेको छ, उनले पहिल्याउनुपर्छ । मलाईचाहिँ उसमा पनि फिल्मप्रतिको मोह घटेको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको छ । यसबाहेक उनले सिनेमा र चरित्रलाई अझ गहिरो रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ । यत्ति भयो भने केकीलाई फिल्ममा सफल भइरहन कसैले रोक्न सक्दैन ।